အဖွဲ့ ဝင်ထားခြင်း အားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ:
Disney ရဲ့ မူရင်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ရယူလိုက်ပါ။
ဒစ်စနေရဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေအားလုံးကို အခမဲ့ကစားလိုက်ပါ။
အပါတ်စဉ် လက်မှတ် ၄ စောင်ရယူပါ။
သင် ကြိုက် နှစ်သက်သမျှ ကို လက်မှတ် နဲ့ ရယူနိုင် သလို လက်မှတ်တွေကို စုဆောင်းထားလို့လဲ ရပါတယ်။
အပါတ်စဉ် အသစ်တွေ တင်ပေး ပြီး ဘာအသစ်ရှိလဲ နဲ့ အယ်ဒီတာ့ လက်ရွေးစင် ထဲကလဲ ကြည့် လို့ရတယ်လေ!
ထုတ်လုပ်မှု အများစုမှာ 50MB ထက်နည်းပါတယ်။
ထပ်မံ ပေးဆောင်စရာ မလိုပဲ အချိန်မရွေး အဖွဲ့မှထွက်ခွာ နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ် အကောင့် စာမျက်နှာ မှ နေ၍ လွယ်ကူစွာ အချိန်မရွေး အဖွဲ့မှထွက်ခွာ နိုင်ပါတယ်။
အကူအညီ လိုအပ်ပါက support@8elements.net သို့ ဆက်သွယ်နိင်ပါတယ်။
"သေချာသည်/အဖွဲ့ဝင်မယ်" ကိုနိုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ၏ လိုက်နာရန် နှင့် စည်းကမ်းချက်များ ကို ဖတ်ရှုလက်ခံ ပြီး သင်၏ ဖုန်းဘေလ်မှ အခကြေးငွေ ကောက်ခံ ခြင်းကို လက်ခံပါသည် ဟု သဘောတူခြင်း ဖြစ်သည်။
တပါတ်ကို 450 ကျပ်သာ!!!